Recipe Pie "Scallops" ngesibindi kunye namaqanda
I-pied baked-scallops ndiyithande le fomu yeebhanti eziphekiweyo. Zilula kakhulu ukukhusela, kwaye ngoncedo lomqambi kwaye unqunywe kakuhle. Ukongezelela, le fom ikuvumela ukuba ulungele ngokufanelekileyo kwaye ululaze. Kwifom ebhaka, iimveliso zigcina umlo wazo. Utywala kunye nokuzaliswa kunokuba nayiphi na. Le recipe isebenzisa inhlama ephekwe ngokudibanisa kwewayini elimhlophe. Ukuzaliswa kwesibindi, amaqanda kunye anyanisi yenye yeentanda zam!
Isibindi sesilwanyana 300g
I-Pepper emnyama mhlaba 0.5 tsp.
I-sunflower engabonakaliyo ioli 1 tbsp. l.
Inyathelo 1 Ukulungiselela inhlama kufuneka uthathe umgubo wengqolowa ebangeni eliphezulu, igargarine kunye newayini elimileyo.
Inyathelo 2 Iwayini iyafudumala kwaye ithabathe i-margarine kwi-grater enkulu.
Inyathelo 3 Gxotha umxube kude kube lula.
Inyathelo 4 Hlanganisa umgubo ococekileyo kumxube.
Inyathelo lesi-5 Hlanganisa inhlama uze uyibeke kwindawo ebandalayo kwiiyure eziyi-2-3.
Inyathelo 6 Ukuzalisa, ukuthatha isibindi (yenkomo okanye inyama yengulube), ubisi, ioli, i-anyanisi, amaqanda, umgubo, umpompe omnyama kunye netyuwa. Ukuba ufuna ukucutha ukuzaliswa, ungathabatha ukhilimu omuncu okanye i-mayonnaise.
Inyathelo 7 Susa izitya ze-bile kunye nemithambo yegazi ephezulu kwisibindi, uhlambe, uhlalele umzuzu omnye kumanzi ashushu, ususe ifilimu uze ufake imizuzu engama-30 ebisi. Emva koko, yomekile kwaye uthathe iinqununu 1 cm.
Isinyathelo 8 I-Sliced ​​kancane ngepilisi kwaye uqhube ngomgubo.
Isinyathelo 9 Fryza isibindi kwioli ehambayo imizuzu eyi-10 enye icala, enye enye. Ngaphambi kokuphela kwetyuwa.
Inyathelo 10 Ulungele isibindi ukupholisa kwaye udlule kwi-lattice emihle ye-mincers.
Inyathelo 11 Bilisa amaqanda ngemizuzu engama-10, cwilisa emanzini abandayo, uze udibanise uze uthathe iibhubhu ezincinane.
Inyathelo 12 Hlaba i-bulb, yinqumle kwisiqingatha, kwaye emva kwesinye isahlulo sibe ngamacangca amancinci.
Inyathelo 13 Fry i-anyanisi kwibhotela uze ube mnyama.
Inyathelo 14 Hlanganisa isibindi, amaqanda kunye anyanisi, pepper kunye netyuwa ukunambitha.
Inyathelo 15 Gxotha umxube. Ukuba ubunzima bunzima kakhulu, unokongeza ipoyiji ye-mayonnaise okanye ukhilimu omuncu.
Inyathelo 16 Umquba wokuguqa, ugqityiwe nge-roller kwaye uthathe izibonda ezincinci.
Inyathelo 17 Gqithisa isangqa ngasinye ngesimo se-burrito esincinci, esesigxina. Ngesiqingatha sebhanki nganye, faka 1 tbsp. l. Gcwalisa esinye isiqingatha, gubungela imida ngokucophelela kwaye usike nge-cutter ekhethekileyo.
Inyathelo 18 Beka iimveliso kwi-tray yokubhaka, utyutywe ngeoli, kunye ne-brush ngeqanda elincinyiweyo.
Inyathelo 19 Faka i-pan kwi-ovini, uphelele kwi-200 ° C, kwaye ubhake imizuzu eyi-15-20. Faka i-patties kwiphilisi yephepha.
Iinqununu ezenziwe ekhaya
ICocoa kunye neHercules kunye neNgcungo
I-pankwake ye Buckwheat
IHososope ngoNovemba 2017 evela kuVasilisa Volodina
Ieholide zasehlobo zezingane kunye nentsha
I-Lenten oatmeal cookies
Ukunyamekelwa kwamalungu phakathi kwamatyala
Ukukhulelwa kweSobchak: kwenzeka ntoni kwisisu se-telediv eyaziwayo? (ifoto, ividiyo)
Unyango lwezilwanyana zamaphiloma zepulama
Umsebenzi kunye nomvuzo